कस्तो निर्दयी संस्कार ! किन गरिन्छ छोरीको योनी छेदन ? « News of Nepal
भारतको एउटा सानो बोहरा मुस्लिम समुदायमा यो कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ । बोहरा समुदायका महिलाहरुले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस कुसस्कारलाई हटाउन विभिन्न अभियान चालेका छन, तथापी यस कुप्रथामा कुनै कमि आएको छैन् । जसका कारण अधिकांश महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
‘हजुरआमाले मलाई एउटा पुरानो र जीर्ण भवनमा पु¥याएपछि भने मेरो मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि उनले मलाई एउटा कोठामा लगिन् । मलाई भुइँमा ओछ्याइएको एउटा कार्पेटमा बस्न लगाइयो ।
एफएमजी अन्र्तगत महिलाको यौन अंगलाई आशिक वा पूर्ण रुपमा छेदन गरिन्छ । काट्नुको कुनै चिकित्सकीय कारण छैन् । रानालभीका अनुसार यो संस्कार पूर्ण रुपमा पितृसतात्मक सोचमा आधारित छ ।
योनिच्छेद गरेपछि महिलाको यौन शक्ति घट्ने र बाहिर केटासँग बरालिंदै नहिड्ने तथा आफ्नो श्रीमानसँग मात्र भक्त भइन्छ भन्ने विश्वासमा यो कुसस्कारले जरा गाडेको उनको भनाई छ ।
वेश्याको विज्ञप्ती …..